Meeleynta shirkad tikniyoolajiyad bey'adeed, oo diiradda saareysa baakadaha saaxiibtinimo ee bey'ada
Ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka ayaa ah jihada horumarka qaranka, dhaqaalaha wareegtana waa udub dhexaadka warshadaha caalamka. Kacaanka cagaaran ee leh ilaalinta deegaanka sida mawduuca ayaa noqon doona mawduuca ugu weyn ee shirkadaha Shiinaha. Tan iyo markii la aasaasay, EBI ...
Maxay tahay sababta ay macaamiisha sigaarku u sii kordhayaan ay u doortaan baakadaha tuubada aluminium
Sanadihii la soo dhaafay, noocyada ugu waawayn ee sigaarka ayaa si isdaba joog ah u bilaabay sigaarka aaladda aluminium ee dabiiciga ah. Baakadaha tuubada Aluminiumku waa burburinta baakadaha sanduuqa dhaqanka ee alwaaxa. Tuubada aluminiumka lafteeda waa fududahay in la qaado waxaana loo iibin karaa si madax banaan. Waxay leedahay shaqeyn heer sare ah waana especi ...
Sidee looga dhigaa cabitaankaaga mid umuuqda mid horumarsan?
Suuqa waxsoosaarka badeecadaha waxsoosaarka (CPG) ee sida xawliga ah u koraya, qashinka baakadaha ayaa wali ah walaac sii kordhaya ee daneeyayaasha iyo macaamiisha. Marka la eego caqabadan, milkiileyaasha sumadaha waxay maalgashi ku samaynayaan ururinta iyo dib-u-warshadaynta nidaamyada si loo yareeyo qashinkaas. Si kastaba ha noqotee, noocyada qaarkood waxay qaadanayaan a ...
Rookie ee warshadaha baakadaha bottle dhalada aan hawada lahayn
Weelka faakiyuumka (vacuum flask) waxaa loola jeedaa weel ka sooci kara gaaska heerkulka dibadda ama weel kala soocaya bakteeriyada dibadda ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa gebi ahaanba laga faquuqi karaa hawada si looga hortago in badeecada ay oksidheeysato oo ay ka sii darto sababo la xiriira hawada, iyo bakteeriyada taranka, a ...
Kordhinta caqliga, Isdhexgalka Bartamaha
Isbedelka weyn ee horumarka ee warshadaha baakooyinka dawooyinka: casriyaynta caqliga, isdhexgalka xarunta * Xidhmada farmashiyaha iyo cuntada In kasta oo baakadaha dawadu u muuqato wax fudud, waxay saamayn weyn ku leedahay tayada iyo badbaadada daawooyinka. Waxay ka ilaalin kartaa daawooyinka enviro ...
Suuqa baakadaha cuntada ayaa gaari doona 600 bilyan oo doolarka Mareykanka ah!
Laba isbeddel oo cusub oo ku saabsan horumarinta warshadaha Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'ad cilmi baaris ku sameysay suuqa, illaa 2026, suuqa xirmooyinka cuntada adduunka wuxuu gaari doonaa 606.3 bilyan oo doolarka Mareykanka, iyadoo koror sanadle ah uu noqon doono 5.6%. Isla mar ahaantaana, isbeddello horumarineed oo cusub ayaa ka soo ifbaxaya ...
Falanqaynta rajada suuqa ee warshadaha baakadaha Shiinaha ee 2021
Warshadaha baakadaha balaastigga ah waa warshad caalami ah oo si isdaba joog ah u sii kordheysa. Soo kabashada dhaqaalaha adduunka iyo horumarka degdegga ah ee ganacsiga iyo warshadaha saadka casriga ah, warshadaha baakadaha ayaa si xawli leh kor ugu kacay adduunka tan iyo bartamihii qarnigii labaatanaad. Sababtoo ah functi badan ...
Shan dhibcood ayaa ka dhigaya baakadaada wax soo saarka mid aad u fiican
1. Si buuxda u tixgeli ficil ahaanshaha baakadaha dibedda. Baakadaha alaabtu waa inay marka hore tixgeliyaan ku dhaqanka iyo fududeynta gaadiidka. Baakadaha waxaa loogu talagalay alaabooyinka, waana muhiim in la helo naqshad wax lagu rakibo oo ammaan ah oo habboon. Waxaa jira dhinacyo badan oo ku saabsan waxqabadka baakadka ....
Dabaaldegdeena waxaa lagu qabtay hudheelka Nanchang Boli. Oo waxaannu ku martiqaadnay dhammaan alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican ee loogu talagalay daasadaha aluminium ee Shiinaha inay ka qayb qaataan xafladdayada. F ...
Qalabka aluminium ee kala duwanaanta dalabka
Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo qeybaha kala duwan ee nolosha ay dardar gelinayaan casriyeynta ilaalinta deegaanka, marka lagu daro baabi'inta qalabka ilaalinta deegaanka ee isticmaalka tamarta sare iyo alaabada wasakheynta badan, qalabka baakadaha ayaa sidoo kale bilaabay inay ku dadaalaan fudeyd iyo dib u adeegsiga, iyo aluminium ...
Sheyga ha hadlo
Xirmooyinka alaabtu ma aha oo kaliya khibradda muuqaalka ee macaamiisha ku xiran badeecada, laakiin sidoo kale waa muujin toos ah shakhsiyadda sheyga. Baakadaha waa jaakad soo jiidasho leh oo ka mid ah alaabooyinka wanaagsan iyo hab muhiim ah oo lagula wareegi karo suuqa. Meelaynta sax ah iyo pac wax soo saarka bilicsanaanta ...